तपाईको ब्लग ट्राफिक कसरी बढाउने - Victor Mochere
ब्लगहरू प्रारम्भिक 2000 मा देखा पर्यो, र मूल्यवान र उत्कृष्ट मार्केटिङ उपकरण बन्न विकसित भएको छ। यद्यपि, पाठकहरू प्राप्त गर्नु धेरै जसो ब्लगरहरूको लागि सधैं सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती भएको छ। तपाइँसँग तपाइँको ब्लगमा उत्कृष्ट सामग्री हुन सक्छ, तर अझै कुनै अर्थपूर्ण ट्राफिक छैन। तपाईं केवल मानिसहरूले जादुई रूपमा तपाईंको ब्लग फेला पार्न र यसलाई पढ्न सुरु गर्ने आशा गर्न सक्नुहुन्न। ट्राफिक, सरल अर्थमा, तपाईको ब्लगले एक महिनामा प्राप्त गरेको भ्रमणको औसत संख्या हो, यो एक हप्ता, दिन, घण्टा, आदि पनि हुन सक्छ।
मूर्त परिणामहरू देख्नको लागि तपाईंले आफ्नो ब्लगमा गुणस्तरीय ट्राफिक चलाउन आवश्यक छ। कारण यो हो कि तपाईको ब्लगले जति धेरै ट्राफिक प्राप्त गर्दछ, तपाईले उति धेरै आम्दानी गर्नुहुनेछ। तपाईंको ब्लगको ट्राफिक बढाउने दुई प्रमुख तरिकाहरू छन्: अर्गानिक रूपमा र सशुल्क विज्ञापनहरू मार्फत। जबकि पहिलेको लागि समय, धैर्य र धेरै प्रयास चाहिन्छ, पछिल्लो, प्राय: पैसा चाहिन्छ। तपाईंको लक्ष्य सधैं सान्दर्भिक र लक्षित ट्राफिक उत्पन्न गर्न हुनुपर्छ।
यसको एउटा ठूलो भाग हो कि तपाइँ मानिसहरूले तपाइँको ब्लगमा आइपुगेपछि के गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु हो, यो धेरै ट्राफिक चाहनु एउटा कुरा हो, तर यसको लागि कारण हुनुपर्दछ। एकचोटि तपाईंले आफ्नो ब्लगमा मानिसहरूले के गरून् भन्ने कुराको स्पष्ट विचार प्राप्त गरेपछि, तपाईंले आफ्नो ब्लगलाई यो हुने सम्भावना सुधार गर्न अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ - साना ट्वीकहरूले रूपान्तरणहरूमा ठूलो भिन्नता ल्याउन सक्छ।
तपाईंको ब्लगमा ट्राफिक बढाउन मद्दत गर्न यहाँ केही सुझावहरू छन्।
1. सामाजिक मिडियामा आफ्नो ब्लग प्रचार गर्नुहोस्
2. अन्य ब्लगरहरूसँग जडान गर्नुहोस्
3. आफ्नो ब्लगमा समाचार कथाहरूको जवाफ दिनुहोस्
4। बहुमूल्य सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्
5. भाइरल सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्
6. खोजको लागि अनुकूलित
7. एक अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव
आजकल कुनै पनि व्यवसायको रूपमा, यदि तपाइँसँग सोशल मिडिया खाताहरू छैनन् भने तपाइँलाई ध्यान दिइने सम्भावना छैन। हामी Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat र LinkedIn मा तपाईंको ब्लगको लागि पृष्ठहरू/खाताहरू सेटअप गर्न सिफारिस गर्छौं (तपाईँ अनिवार्य रूपमा आफ्नै व्यवसाय हो, हैन?) यी खाताहरूलाई तपाइँको ब्लगमा समान रङ योजना/विषयवस्तुमा डिजाइन गर्नुहोस् ताकि तपाइँको ब्रान्ड सुसंगत र सजिलै चिन्न सकिन्छ।
नयाँ पोष्टहरू साझेदारी गर्न र साथी ब्लगरहरू/प्रभावकर्ताहरू/कम्पनीहरूलाई ट्याग गर्न प्रयोग गर्नुहोस् जसले तपाईंको सामग्री साझा गर्न सक्छ र यसलाई अझ ठूलो दर्शकहरूमा पुग्न मद्दत गर्दछ। तपाइँले तपाइँको ब्लगलाई फराकिलो दर्शकहरूमा पुग्न मद्दत गर्नको लागि केहि सशुल्क विज्ञापनहरूमा पनि डुब्न सक्नुहुन्छ, वा थप लाइकहरू उत्पन्न गर्न प्रतिस्पर्धा चलाउन सक्नुहुन्छ। एकचोटि तपाईंले अनुयायीहरू पाउनुभएपछि, तिनीहरूलाई नियमित रूपमा पोस्ट गरेर रुचि राख्नुहोस् (नयाँ ब्लग पोष्टहरूको लागि मात्र होइन)।
समान विषयहरूको बारेमा ब्लग गर्ने अन्य व्यक्तिहरूलाई आफूलाई चिनाउनुहोस्। तपाइँ प्राविधिक रूपमा प्रतियोगी हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यको बावजुद, तपाइँ ब्लगर समुदाय कत्तिको सहयोगी हुन सक्छ भन्ने कुराले सुखद रूपमा आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ। धेरै ब्लगरहरूसँग उनीहरूको साइटमा एक 'लिङ्कहरू' पृष्ठ पनि हुन्छ जुन उनीहरूले समुदाय भित्रका आफ्ना साथीहरूलाई तपाईंको आफ्नै ब्लगमा लिङ्कको बदलामा लिङ्क गर्न प्रयोग गर्छन्। यसले तपाईंको एसईओको साथ व्यापक रूपमा मद्दत गर्नेछ (त्यो खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन हो - तपाईंको ब्लग गुगल खोजहरूमा पप अप हुने सम्भावना कति छ)। यदि तपाइँ अन्य ब्लगरहरूसँग संलग्न हुनुभयो र तिनीहरूको सामग्री साझा गर्नुभयो भने, उनीहरूले सम्भावित पक्ष फिर्ता गर्नेछन् - तपाइँ केही सहयोगहरूमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंको आलासँग सम्बन्धित समाचारमा केहि हुन्छ भने, संलग्न हुनुहोस्। यसलाई हामीले 'न्यूजज्याकिङ' भनेर बुझाउँछौं र यसले तपाईंलाई केही उत्कृष्ट एक्सपोजर प्राप्त गर्नको लागि उपचारको काम गर्न सक्छ। तपाइँ सान्दर्भिक ह्यासट्यागहरु संग तपाइँको बिट भन्न को लागी सामाजिक मिडिया मा प्राप्त गर्न को लागी, छलफल मा संलग्न हुन र पत्रकारहरु सम्म पुग्न को लागी तपाई टिप्पणी को लागी उपलब्ध हुनुहुन्छ भन्न को लागी। यदि तपाइँ तपाइँको आला को स्वामित्व मा साँच्चै महान हुनुहुन्छ भने, पत्रकारहरु पनि तपाइँकहाँ आउन सक्छन्।
सामग्री नलेख्नुहोस् किनभने यो तपाईंको आलाको बारेमा हो। यसको सट्टा, तपाईंले आफ्नो पाठकको लागि सामग्री लेख्नुपर्छ। तिनीहरू के बारे थप जान्न चाहन्छन्? तपाईंले तिनीहरूलाई कारबाही गर्न कसरी मद्दत गर्नुहुन्छ? तपाइँ तपाइँको ब्लग पोस्ट विषयहरु तपाइँको दर्शकहरु द्वारा खोजी गरिन्छ कि भनेर हेर्न को लागी किवर्ड अनुसन्धान जस्तै उपकरणहरु को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँले तपाइँको ब्लग विषयहरू पनि Google मा हेर्नु पर्छ कि कुन प्रकारको ब्लग पोष्टहरू तिनीहरूको बारेमा लेखिएका छन्।
भाइरल सामग्री सिर्जना गर्नाले तपाईंलाई नयाँ बजारमा पुग्न मद्दत गर्दछ र, फलस्वरूप, तपाईंको पाठकहरू बढाउनेछ। यो गर्नु भन्दा सजिलो हुन सक्छ, तर भाइरल सामग्री सिर्जना गर्ने कुञ्जी भनेको तपाइँको आला ब्लगिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादास्पद वा उच्च-चर्चा गरिएका विषयहरूमा ट्याप गर्नु हो - जसरी तपाइँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, यसले प्राय: न्यूजज्याकिंग समावेश गर्दछ। यो तपाईंको आला भएकोले, तपाईं भावुक, विचारधारा र यसको बारेमा जानकार हुनुहुनेछ, त्यसैले तपाईं एक राय पोस्ट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ जुन मानिसहरूले पढ्न, साझा गर्न र कुरा गर्न चाहन्छन्।
तपाईको ब्लग पोष्टहरू राम्रो जानकारीले भरिपूर्ण हुन सक्छ, तर यदि यो खोजमा रैंक गर्दैन भने कसैले पनि देख्ने छैन। यो नराम्रो खबर हो यदि तपाईं अधिक ट्राफिक प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने। तर सौभाग्य देखि यो गाह्रो छैन खोजको लागि अनुकूलन गर्नुहोस्। सुरु गर्नको लागि, तपाइँ राम्रो कुञ्जी शब्दहरू, छिटो वेबसाइट, र चाहानुहुन्छ अनुकूलित छविहरु। जाँच गर्नुहोस् वेबसाइट रैंकिंग सुधार गर्न SEO कसरी प्रयोग गर्ने।
यदि तपाइँ तपाइँको ब्लग बढाउन चाहानुहुन्छ भने तपाइँ अरु सबै भन्दा बाहिर खडा हुन आवश्यक छ। तपाइँ यो एक अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव (USP) को साथ गर्न सक्नुहुन्छ। एक USP त्यस्तो चीज हो जसले तपाइँको ब्लगलाई अरू सबै भन्दा फरक बनाउँछ - किन कसैले तपाइँको ब्लगलाई अर्कोमा पढ्नुपर्छ? त्यसोभए तपाइँ तपाइँको आफ्नै USP कसरी फेला पार्न सक्नुहुन्छ? तपाईको ब्लगको विषयलाई केहि विशिष्टमा तल राख्नुहोस्। त्यसैले सबै उमेरका लागि फिटनेस ब्लग सिर्जना गर्नुको सट्टा, तपाइँ कलेज विद्यार्थीहरूको लागि दैनिक कसरत ब्लग सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। यो विषय विशिष्ट छ, तर मानिसहरूको ठूलो समूहमा पुग्छ।
10 पैसा कमाउने शीर्ष 2022 ब्लग आला